छुवाछूत विरूद्व गम्भीर बहस आवश्यक छ : सुमनसिंह — Ratopost.com News from Nepal
छुवाछुत बिरुद्ध कथित उच्च जात वाला हाम्रो समुदाय पनि मैदानमा उत्रीएको देखिन्छ । यो एकदम स्वागतयोग्य छ, साथै तन्नेरी पुस्ता छुवाछुत वाला दुश्कर्म बिरुद्ध बिद्रोह गर्ने नै देखिन्छ । अर्थात एउटा जागरण आन्दोलनको मोर्चा खोल्न सकिने र खुल्ने बस्तुगत परिस्थिति बन्दै गएको देखिन्छ । यो सुखद छ । तर जात ब्यवस्थाको ब्याख्याता र यो बिकृतिलाई नस्ट गर्नै पर्ने अभियानका संचालक हामी कतै बहसमा जुटेको देखिन्न । समस्या समाधान उपर बिमर्श गरेको देखिन्न । सिंगो समाज रुपान्तरणसंगै जोडिएर आउने छुवाछुत समस्यालाई सदासदाको निम्ति मानिसका दिमागहरुबाट मिल्काउने उपर कुनै छलफल देखिन्न । यतिमात्र होइन, यो कुरितीलाइ मिल्काउंदै गर्दा अब हामीले दिने बैकल्पिक संस्कृती कस्तो हुने कतै चर्चा देखिन्न ।
कोभिड महामारी र लकडाउन यता नै नेपाली समाजमा दलितहरु माथी भएका विभेद, अत्यचार, हत्या, बलात्कार जस्ता कंयौ अमानविय हर्कतहरु देखिए । रुकुममा सबैको मन रुवाउने घटना घट्न पुग्यो । यी सबै बिसय उपर केही थान प्लेकार्डहरु सडकमा देखिन्छन, सामाजिक संजालमा एउटा हावा चल्छ र त्यही हावालाई पछ्याउने (केही सांच्चिकै छुवाछुत बिरोधी र केही ढोगीं ) हरुको धारणाहरु पढ्न पाइन्छ । के यति मात्र हो त यो समस्याको समाधान ? यति मात्र हो हामीले गर्न सक्ने ? यस्तै मात्र हो त हाम्रो क्षमता ? हामी यस्तै ढोङ्ग वा पाखण्ड मात्र गरिरहने संधै ?
प्रश्न हामीलाई नै हो । यो प्रश्न दुरदराजमा सदिऔं देखि कथित उच्च जात भनिने (खास दलितहरु चैं उनीहरु) बाट कुकुरको दर्जा भन्दा पर राखिएका गरिव दलितहरुको हो । उनीहरुलाई दलित मुक्तिको गित मात्र सुनायौं, उनीहरुलाई उराल्यौं, आफ्नो बिद्वत्व उनीहरुमा पोखेर उनीहरुलाई सपना देखायौं । यो अहिले देखि होइन आधादर्जन पटक ब्यवस्थाहरुमा बदलाव आयो, आज गाउँ गल्लिका खुरापातिहरु महाराज बनिसके तर ति तल्लो जात भनिएकाहरुको जीवन उस्तै छ । उस्तै गरि हेपिन्छन, थिचिन्छन, पिसिन्छन । सम्झंदा रगत उम्लदैन ? मेरो त उम्लन्छ, किनकी उनीहरु हाम्रा सहोदर आफन्तहरु हुन । उनीहरु हाम्रा साथीहरु हुन । उनीहरु हाम्रो हृदयमा छन ।
कथित उच्च जातको राग अलाप्नेहरुलाई अहिले पनि अहंकार र अभिमान नै छ । कथित दलित बनाइएकाहरु पिंसिदो क्रममा छन । बिचका ढोंगींहरुलाइ ढोंग पसार्न निक्कै आनन्द आइरहेको छ । त्यसैले मलाई मेरो बिभेदकारी संस्कृती प्रति घृणा लागेर आउँछ किनकी यसले मान्छेलाई मान्छे नगन्ने, छुवाछुत गर्ने संस्कृति प्रति गर्व गर्छ । छुवाछुत बिरोधी अभियान्ताहरुलाइ अनुरोध छ, गम्भीर बहस गरौं । यहाँ भावनात्मक हावामा उडान भर्नेको कमि छैन तर यथार्थको भुंइमा घिस्रीनु पर्यो भने कोहि तयार हुंदैनन । प्लेकार्ड वाला दुइदिने उफ्राइ होइन सदा सदाको निम्ति समाजबाट यो विकृतीलाई फ्याक्न विशाल जागरण आन्दोलनको तयारी गरौं । बैकल्पिक संस्कृतीको बहस गरौं जहाँ हाम्रो जात बिहिन समाज निर्माणको सपना साकार गर्न सकियोस ।